Yakabviswa pasina kutsiva: CCXP Cologne 2020 ichabviswa nekuda kweiyo corona denda - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 19, 2020 | CCXP Cologne, nhau, Events
Avo vaive vachiri netarisiro yekuti CCXP Cologne inogona kuitika gore rino zvino vachaodzwa mwoyo: Chinyorwa chechipiri chegungano idzva mudzimba dzekuratidzira dzeCologne chakamiswa. Chikonzero: Kupararira kwehutachiona hwekorona uye mamiriro asina chokwadi kune vanoronga. Chiitiko chekutengeserana hachizodzokororwe gore rino, asi kwatove nezuva rakatarwa re2021.
Hurumende dzemubatanidzwa nedzihurumende dzakabvumirana nhungamiro dzakabatana kuti dzive nedenda reCoronavirus. Chinhu chakakosha chemutemo wehurumende yeNRW yaive kumiswa kwezviitiko zvikuru, zvinosanganisira maforamu nemakongiresi.
Hapana kuronga kuchengetedza: CCXP Cologne 2020 yakabviswa
Vatungamiri veKoelnmesse vakafunga kumisa basa rekutengeserana pakupera kwaJune 2020, izvo zvinokanganisawo CCXP Cologne, iyo ingadai yakaitika muCologne kechipiri gore rino. Iyo CCXP Cologne yakarongerwa nguva kubva munaChikumi 26 kusvika 28.
Sarudzo iyi inotsigirwa nechikwata chenhamo cheguta, icho pamusangano waro waKurume 18 chakakurudzirawo kuti zviratidziro zvese zvibviswe panguva iyi. Kana zviri zvezvikonzero, vatungamiri veKoelnmesse vanoti kuchengetedzwa kwekuronga kweKoelnmesse, asi vatori vechikamu muzviitiko zvekutengeserana, vachave vasina simba, "kure kupfuura yekare".
Iyo CCXP Cologne haiitike nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza uye kunetseka nezve hutano hwevashanyi. Mufananidzo: André Volkmann
Nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza uye nekuda kwemamiriro ekufamba akaomarara, zvakange zvisingaite kubata fairi "mumhando yakajairika", sekureva kwevarongi. Sezvineiwo, iyo CCXP Cologne haizodzoserwe zvakare: iyo fairi ichadzimwa gore rino pasina kutsiva. Varongi vakaisa zuva regore rinouya zvakananga: CCXP Cologne 2021 ichaitika kubva Chikumi 25 kusvika 27, 2021.
Neizvi, Koelnmesse inoda kugadzira kujekesa kune vatengi vayo uye yakakodzera nguva yekugadzirira. Mhinduro kubva kune vamiriri veindasitiri yaive yakanaka.
Kuti vashanyi vekutanga-nguva havafanirwe kuita pasina CCXP Cologne: Heino foto gallery yegore rapfuura fair. Mufananidzo gallery yeCCXP Cologne 2019.
isu kutsvaka yevanyori venhau mundima dzemitambo, mabhuku pamwe nemafirimu uye nhepfenyuro.
Unoda here kutora chikamu? zvino > pano < baya uye shandisa.
Kare Comment: Coronavirus - Chete vangangove vapanduki vari kuchema "Rusununguko!"
Inotevera Wing flap sedhijitari bhodhi mutambo: Shanduro yeNintendo Shandura ichaburitswa muchirimo
Vadzidzi vanodzidza kubata ne "kutamba uye kubhejera"
Conan Unconquered: Funcom inoratidza gameplay yechaiyo-nguva zano mutambo